राप्रपा अध्यक्षमा लिङ्देनले गरे उम्मेदवारी घोषणा, धवलशमशेर महामन्त्री
झापा – राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको अध्यक्ष पदका लागि राजेन्द्र लिङ्देनले उम्मेदवारी दिने घोषणा गरेका छन्। केहीबेरअघि काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै लिङ्देनले अध्यक्षमा उम्मेदवारी दिने घोषणा गरेका हुन्। उनको प्यानलबाट महामन्त्रीमा धवलशमशेर राणाको उम्मेदवारी घोषणा गरिएको छ। अध्यक्षमा उम्मेदवारी दिने घोषणा गरेका लिङ्देन प्रदेशमा बलियो देखिएका छन्। सात प्रदेशमध्ये तीनमा लिङ्देन समूहबाट अध्यक्ष निर्वाचित भएका छन्। […]
काठमाडौँ- राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) अध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी घोषणा गरेका राजेन्द्र लिङ्देनलाई डा. प्रकाशचन्द्र लोहनीको समर्थन प्राप्त भएको छ । युवा नेताहरूको समर्थनमा अध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी घोषणा लिङ्देनलाई लोहनीको समर्थन प्राप्त भएको हो । डा. लोहनीले मंगलबार सार्वजनिक कार्यक्रममार्फत लिङ्देनलाई समर्थन रहेको गर्ने तयारी गरेका छन् । ‘मंगलबार मध्यान्ह १२ बजे डा. लोहनीले लिङ्देनलाई समर्थन […]
राप्रपा महाधिवेशनः प्रकाशचन्द्र लोहनीको लिङ्देनलाई समर्थन
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) अध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी घोषणा गरेका राजेन्द्र लिङ्देनलाई डा प्रकाशचन्द्र लोहनीको समर्थन प्राप्त भएको छ । युवा नेताहरूको समर्थनमा अध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी घोषणा लिङ्देनलाई लोहनीको समर्थन प्राप्त भएको हो । डा लोहनीले मंगलबार सार्वजनिक कार्यक्रममार्फत लिङ्देनलाई समर्थन रहेको गर्ने तयारी गरेका छन् । मंगलबार बिहान साढे ११ बजे पत्रकार सम्मेलन डा लोहनीले लिङ्देनलाई समर्थन रहेको घोषणा गर्ने राप्रपा नेता जनकराज पाठकले जानकारी दिए । यसका लागि जमलस्थित एलो प्यागोड
राप्रपा अध्यक्षमा डा. लोहनीको समर्थन लिङ्देनलाई
१३ मंसिर, काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष डा. प्रकाशचन्द्र लोहनीले मंसिर १५ देखि हुने महाधिवेशनमा राजेन्द्र लिङ्देनलाई समर्थन गर्ने भएका छन् । नयाँ नेतृत्व चयनका लागि राप्रपा अध्यक्ष कमल थापा र नेता राजेन्द्र लिङ्देनले उम्मेदवारी घोषणा गरिसकेका छन् । डा. लोहनीले आफ्नो समर्थन राजेन्द्र लिङ्देनलाई हुने बताए । उनले अहिलेको तीनैजना अध्यक्षले दोहोर्‍याउन नहुने […]
काठमाडौं । राप्रपा अध्यक्ष कमल थापाले १५ देखि १७ मंसिरसम्म हुने पार्टीको महाधिवेशनमा फेरि अध्यक्षमा घोषणा गरेका छन् । सोमबार काठमाडौंमा विशेष कार्यक्रम आयोजना गरी थापाले पुनः अध्यक्षमा उठ्ने घोषणा गरेका हुन् । उनले घोषणा कार्यक्रममा राप्रपाका पुराना नेताहरू लोकेन्द्रबहादुर चन्द, विश्वबन्धु थापा, कृष्णचरण श्रेष्ठ, हेमबहादुर मल्ल, चन्द्रबहादुर गुरुङ जस्ता नेताहरुको नाम स्मरण गरेका थिए […] The post कमल थापाले फेरि राप्रपाको अध्यक्षमा उम्मेदवारी घोषणा गरे appeared first on राजधानी राष्ट्रिय दैनिक (लोकप्रिय राष्ट्रिय दैनिक)-RajdhaniDaily.com - Online Nepali News Portal.
राप्रपा महाधिवेशन : अध्यक्षमा कमल थापाको उम्मेदवारी घोषणा
काठमाडौँ- राप्रपा अध्यक्ष कमल थापाले १५ देखि १७ मंसिरसम्म हुने पार्टीको महाधिवेशनमा फेरि अध्यक्षमा घोषणा गरेका छन् । सोमबार काठमाडौंमा विशेष कार्यक्रम आयोजना गरी थापाले फेरि अध्यक्षमा उठ्ने घोषणा गरेका हुन् । उनले घोषणा कार्यक्रममा राप्रपाका पुराना नेताहरू लोकेन्द्रबहादुर चन्द, विश्वबन्धु थापा, कृष्णचरण श्रेष्ठ, हेमबहादुर मल्ल, चन्द्रबहादुर गुरुङजस्ता नेताहरुको नाम स्मरण गरेका थिए । उनले […]
पार्टी नफुटाउने सङ्कल्प गर्दै कमल थापाद्वारा अध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी घोषणा
राप्रपा अध्यक्ष कमल थापाले पार्टीको आसन्न महाधिवेशनमा अध्यक्ष पदका लागि आफ्नो उम्मेदवारी घोषणा गरेका छन् । राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रमबीच पार्टी नफुटाउने सङ्कल्प गर्दै उम्मेदवारी घोषणा गरेका हुन् ।२०७६ साल फागुन २६ गते तत्कालीन राप्रपा र राप्रपा संयुक्तका बीचमा एकीकरण भएको थियो । एकीकरणपछि पहिलोपटक मङ्सिर १५ गते राप्रपाको महाधिवेशन काठमाडौँमा हुँदैछ । कार्यक्रममा बोल्दै थापाले यो महाधिवेशनलाई एकताको महाधिवेशन बनाउनुपर्ने जिकिर गरे । उनले भने, ‘केवल नाम मात्रको होइन, मन वचन र कर्मले एकताक